Kell Brook: Hawlgab Kusoo Laabanaya Feedhka
HomeWararka MaantaKell Brook: Hawlgab Kusoo Laabanaya Feedhka
Kell Brook oo haysta biladda feedhka miisaanka culus ee adduunka ayaa dib ugu soo laaban doono xayndaabka dagaalka feedhka oo uu muddo ka maqnaa markii uu shaaciyey inuu ka fadhiistay.
Brook ayaa bisha March waxa uu kusoo laaban doonaa garoomada iyadoo uu magaalada Sheffield ee waddanka Ingiriiska kula feedhtami doono Sergey Rabchenko.
31 jirkan u dhashay Britain ayaan garoomada feedhka lagu arag tan iyo markii uu ku guuleystay biladda feedhka miisaanka culus ee adduunka, markaas oo uu ka jabay lafta isha ka sarraysa ee wejiga.
Ciyaarta uu dhaawaca culus ku gaadhay ayaa uu bishii May la ciyaaray Gennady Golovkin oo wejiga kala eegtay feedh, markaas oo qayb ka mid ah wajigu ay isku duntay, base yeeshee, wuxuu nasiib u yeeshay inuu adkaysto oo uu dhulka dhigo Gennady Golovkin, suunkana ka qaado.
Rabchenko oo isaguna 31 jir ah una dhashay waddanka Belarus ayaa ay markan kala calaf-qaadi doonaan, hase yeeshee Rabchenko waxa u diiwaangashan in 31 jeer oo uu dagaal feedh ah galay uu guuleystay 29 ka mid ah. Dhinaca kale, Brook waxa taariikhda ugu jjirta rikoodh cajiib ah, kaas oo ah in38 jeer oo uu feedhtamay uu laba jeer oo kaliya guul-darraystay, inta kalena uu farxad la hoyanayey.
Brook ayaa hadal uu saxaafadda siiyey waxa uu ku sheegay inuu doonayo inuu suunka dahabka ah mar kale qaado, laakiin wuxuu sharraxay awoodda ninka uu la feedhtamayo ee Rabchenko oo uu ku sifeeyey khatar loo baahan yahay in laga taxaddaro.
Kulankan feedhka oo dunida oo dhan laga sugayo, ayaa haddii uu Allah ogolaado, waxa sidii looga bartay si toos ah looga daawan doonaa shabakadda ciyaaraha ee Cadalool.com.
Gabon 0-1 Congo: Oniangue oo xulkiisa figta sare saaray
Real Madrid Oo Ka Faa’iidaysanaysa Khilaafka Mourinho Iyo Pogba
Milicsiga Kooxdii Gobolka Sanaag U Qaaday Koobkii Gobolada Somaliland 2004-tii
06/02/2017 Abdiwahab Ahmed